भियतनाम भ्रमण सफल– प्रधानमन्त्री | Sagarmatha TV
भियतनाम भ्रमण सफल– प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भियतनाम भ्रमण सफल भएका दाबी गरेका छन् । भियतनाममा रासससँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण सफल भएको दाबी गरेका हुन् । प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय समाचार समितिसँग गरेको कुराकानीको अंश
– प्रधानमन्त्रीज्यू भियतनामको भ्रमण समग्रमा कस्तो रह्यो ?
–यो भ्रमणले अब नेपाल र भियतनामबीच कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन कतिको सफल र सहज रहँला ?
–यहाँले विश्व समुदायसँग आगामी वर्ष वैशाख दिवसको कार्यक्रम नेपालको लुम्बिनीमा गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यसको तयारी के छ ?
–यो भ्रमण साना र विकासशील देशको सहकार्य र एकताको लागि पनि हो कि ?
–यो भ्रमणको सिलसिलामा केही दुई पक्षीय सम्झौता भएका छन् अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहँला ?